Samsung Exynos 850: Ihe mgbaaka 4G ohuru maka etiti | Gam akporosis
Samsung egosiputa ihe ohuru ohuru nke eji eme ihe eji eme ihe na ekwentị, nke a bu ihe n'ihi na ha gara n'ihu iji njikọ 4G. Exynos 850 ga-a nlereanya n'okpuru Exynos 880 na otu ọsọ ọsọ na 8 Cortex-A55 2,0 GHz cores.
A maara CPU a mgbe ọ bịarutere na Samsung A21s AX, ngwaọrụ nke na-etu ọnụ inwe nnukwu ọchịchị obodo n'ihi batrị na obere oriri nke SoC nke ọ webatara. Firmlọ ọrụ Korea na-enye ya izu abụọ ka e mesịrị ma gosipụta na ọ bụ mgbawa 8-nanometer nke ọma, nke ga-abata n'ụdị ntinye ya.
1 Ihe niile banyere mgbawa Exynos 850
Ihe niile banyere mgbawa Exynos 850
Arụ ọrụ ahụ ga-adị mkpa n'ihi ọsọ ọ na-abịa iji kwado ya, arụmọrụ nke isi ahụ ga-abụ 2,0 GHz. The Cortex-A55 na-eme ka nkwụsi ike dị mkpa, kemgbe ekwuputara ha na 2017 na onye nrụpụta chọrọ ka ha bụrụ ndị ejiri ya na mgbawa 4G ọhụrụ a.
GPU na ihe nlere a ga - abu Mali-G52, eserese a maara nke ọma na nke ahụ dị ezigbo mma ma a bịa n'ịrụ ọrụ na ngwa ndị chọrọ arụmọrụ arụmọrụ. Ekwentị ndị nzọ na Samsung Exynos 850 Ha nwere ike ịnwe mkpebi ihuenyo HD + HD, LPDDR4x RAM na nchekwa eMMC 5.1.
Ugbua na-elele ngalaba njikọ ya, ngwụcha nke ọ batara agaghị echefu ihe ọ bụla, ebe ọ ga-abịa na Bluetooth 5.0, Wi-Fi ac, GPS, AGPS na njikọta ndị ọzọ. Igwefoto ndị ọ ga-arịgo site na ihe mmetụta ya agaghị agafe 21 MP n'azụ ma ọ bụ n'ihu, ha na-ekerịta otu isi.
OWUwu 8 nm
IHE MERE Full HD + (2.520 x 1.080 pikselụ)
EGO eMMC 5.1
Ndị isi 21.7 MP n'azụ - n'ihu 21.7 MP - 16 + 5 MP abụọ
Njikọ LTE Cat 13 - Bluetooth 5.0 - Wi-Fi 802.11 ac - GPS - A-GPS - BeiDou - GLONASS
Samsung egosilarịrị Galaxy A21s nke dị n'ọtụtụ mba ma nwee olile anya ịkpọsa ihe atụ n'ime ọnwa ole na ole sochirinụ Exynos 850 na Exynos 880.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Samsung Exynos 850: Ihe mgbaaka 4G ọhụrụ maka etiti